Ingxaki eqhelekileyo | Shandong Dingtaisheng Oomatshini Technology Co., Ltd.
IINGXAKI EZIQHELEKILEYO NEZISOMBULULO ZOKULUNGISELELA UKULUNGISWA
Naluphi na uhlobo lwezixhobo luya kuvela kule nto okanye kule ngxaki, ingxaki ayoyikisi, isitshixo yindlela echanekileyo yokusombulula ingxaki. Apha ngezantsi sizisa ngokufutshane iingxaki eziqhelekileyo kunye nezisombululo zeendlela ezininzi.
1. Ngenxa yokuba inqanaba lamanzi lingalunganga, iqondo lobushushu lamanzi liphezulu okanye liphantsi, ukungaphumeleli komjelo wamanzi, njl., Kuyimfuneko ukwamkela iindlela ezichanekileyo zonyango ngokweengxaki ezahlukeneyo.
2. Iringi yokutywina iyaguga, iyavuza okanye yaphukile. Oku kufuna ukuhlolwa ngononophelo ngaphambi kokusetyenziswa kunye nokutshintshwa kwangexesha kwiringi yokutywina. Nje ukuba ikhefu lenzeke, umqhubi kufuneka aqhubeke ngokugqibeleleyo okanye atshintshe indawo phantsi kwesiseko sokuqinisekisa ubushushu obukhuselekileyo noxinzelelo.
3. Ukucima kombane ngesiquphe okanye ukucima kwerhasi Xa ujongene nolu hlobo lweemeko, jonga ngononophelo imeko yokusebenza kwe-retort, wenze ubhaliso, kwaye ugqibezele ukuvala inzalo xa ubuya kwakhona. Ukuba unikezelo luyekisiwe ixesha elide, kuya kufuneka ukhuphe iimveliso kwi-retort kwaye uyigcine, kwaye uqhubeke ngokusebenza ngelixa ulinde ukubuyiselwa konikezelo.